“Art Needs No Roof” in Vilnius | Culture
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Amasiko » "Izidingo Zobuciko Azikho Uphahla" eVilnius
"Izidingo Zobuciko Azikho Uphahla" eVilnius
Inhlokodolobha yaseLithuania i-Vilnius iqhamuke nesinye isixazululo esisha sempilo yezenhlalo namasiko yangemva kobhubhane. Idolobha seliphendule isikhungo salo saba “I-Art Needs No Roof” enkulu lisebenzisa amabhodi ezikhangiso ukukhombisa imisebenzi eyi-100 yabaculi baseLithuania.
"Yize igalari yezobuciko isivele ivuliwe, imikhawulo yemibuthano yokuzijabulisa isekhona," kusho uRemigijus Šimašius, imeya yaseVilnius. Ngakho-ke, uVilnius "ususa uphahla lwayo." Sesiphendule inkaba yedolobha yaba igalari enkulu evulekile. Ungomunye wemibukiso emikhulu yobuciko eVilnius equkethe imisebenzi yabaculi abayi-100. Siyethemba ukuthi lolu hlelo luzogqugquzela ubuciko futhi eminye imisebenzi izongena ezindlini zabantu.”
I-Quarantine, ethathe izinyanga ezintathu eLithuania, ibe nzima kubaculi bendawo, njengoba izikhungo zemibukiso bezivaliwe, nemicimbi eminingi yamazwe omhlaba nemibukiso ikhanseliwe. Ngaleyo ndlela idolobha seliqhamuke necebo lokumema amaciko ukuthi azodalula imisebenzi yawo yobuciko edolobheni mahhala, zonke izindleko zikhokhwa idolobha kanye nenkampani esebenzisana nomkhakha wezokukhangisa wangaphandle “JCDecaux Lietuva.”
Phakathi kwababhali kukhona abaculi abadumile emhlabeni wonke, abafana noVilmantas Marcinkevičius, Vytenis Jankūnas, Laisvydė Šalčiūtė, Svajonė noPaulius Stanikas (SetP Stanikas), kanye no-Algis Kriščiūnas kanye no-Živilė Živilė Ž aziwa ngesayensi yedijithali, owaziwa nge-myology yakhe. ukuthuthukiswa komoya womuntu.
“Ukuhlukaniswa kwaba yisikhathi esikhethekile kimi njengeciko,” kusho uNksz Žvėrūna. “Bekuyisikhathi sokuzindla, lapho ungama ucabange ujule ngomphakathi wethu nangeqhaza elidlalwa ubuciko kuwo. Lo bhubhane usenze sathola izindlela ezintsha zokuzwa isiko. Yingakho le phrojekthi ithakazelisa kakhulu: emasontweni ambalwa amabhodi amabhodi agcwele imisebenzi yobuciko. Manje sengibona ngokucacile ukuthi ilukuluku nolwazi olusha luthatha indawo yokwesaba kwezinsuku zokuqala zalolu bhubhane. ”
Sekukonke, abaculi abangaphezu kuka-500 bathumele imisebenzi yabo ukuze ibuyekezwe, iningi labo ezinsukwini ezi-4 kuphela ngemuva kwesimemezelo. Izinto zombukiso zikhethwe ngokwemibandela eminingana: iphothifoliyo yombhali, ukubonakala komsebenzi kanye nokuhlanganiswa kwawo nesimo sedolobha. Ikomidi lokukhetha lalinomgomo wokuqamba umbukiso owawuzomela kangcono ubuciko baseLithuania kuzo zonke izinhlobo zawo.
Izakhamizi nezihambeli zedolobha zingasebenzisa imephu ebonakalayo ukuze zizulazule embukisweni. UMnu. Kriščiūnas, ongumdwebi onamathalente amaningi, okuhlanganisa nomculo, ukuthwebula izithombe nokudweba, ucabanga ukuthi umbukiso othi “Art Needs No Roof” uyindlela enhle yokuhlola idolobha. Njengomculi, waziwa ngekhono lokuhlanganisa ubuciko nomsebenzi womphakathi. Ngo-2019 wenza uhlelo oluthi “Singamakhosi Kadoti” kwenye yezitolo ezinkulu. Manje uMnu. Kriščiūnas uphakamisa "Uhambo Lwezinto Zobuciko Eziyikhulu" - uhambo oluzungeza zonke izinto "Zobuciko Abudingi Uphahla," okuhlanganisa ukuvivinya umzimba nengqondo.
“Lokho kungaba uhambo losuku lonke,” - echaza. “Usuku olunjalo lungawushintsha wonke umbono wedolobha. Ngicabanga ukuthi le phrojekthi iyiwindi elisha lezinhliziyo zezethameli. Uma ubuciko buvezwa kumagalari kuphela, amaciko awafakwa emphakathini: akuwona wonke umuntu oyothatha isikhathi ukuza ukuzobona umbukiso. Kodwa izinto zobuciko ze-"Art Needs No Roof" zizobonwa yibo bonke abantu emgwaqeni.
Isibonisi akuyona ukuphela kwenhloso yombukiso. Zonke izinto zobuciko ziyathengiswa. Amanani nemininingwane yokuxhumana namaciko ingatholakala kuwebhusayithi ekhethekile. Kunamakhulu amaningana emisebenzi yobuciko kuwebhusayithi, kuhlanganise naleyo evela embukisweni ovulekile.
"Abantu bebengakwazi ukufinyelela kumagalari isikhathi eside," kusho uJolita Vaitkutė, umculi osemusha umsebenzi wakhe ongatholakala kuwebhusayithi. “Sisabhekene nezinselelo eziningi, futhi umbukiso othi “Art Needs No Roof” unikeza ukuphumula okuhle. Akugcini nje ngokudala ithuba lokuthi amaciko aveze umsebenzi wawo futhi afinyelele izethameli, kodwa futhi kuyithuba lokuthi izethameli zigqugquzelwe ngezithombe ezibukwayo ezithokozisayo nezishukumisa ingqondo ezindaweni ezingalindelekile.”
I-Jolita Vaitkutė isebenzisa ukudla nezinye izinto zansuku zonke ukufaka, ukwenza nemifanekiso. Umsebenzi wakhe uhlanganisa ukuboniswa kwesidlo sakusihlwa sezihlabani zebhola uCristiano Ronaldo kanye noLionel Messi ezenziwe ngezinto ezingu-658, njengama-oyster, ama-shrimps, amagilebhisi, ama-dessert neziphuzo.
Abalingani abahlelayo be-"Art Needs No Roof" balindele ukusiza abaculi bandise izethameli zabo futhi ngesikhathi esifanayo bavule ubuciko ezakhamuzini nasezihambelini zedolobha. Ngokuvulwa kwemingcele ngaphakathi kwe-EU, i-Lithuania ifinyeleleka ezivakashini zakwamanye amazwe futhi yaziwa njengenye yezindawo zokuhamba eziphephe kakhulu kuleli hlobo.
Njengabantu ngabanye namabhizinisi balahlekelwe ngesikhathi Covid-19 ubhubhane kanye nokuhlukaniswa, u-Vilnius waziwa ngobumbano kanye nezixazululo ezintsha. Idolobhakazi lanikela ngezindawo ezinkulu zomphakathi ukuze kusetshenziswe amakhefi avulekile. Ama-mannequin agcwalisa izikhala ezingenalutho ematafuleni ezindawo zokudlela futhi asetshenziselwa ukubonisa amaqoqo abaklami bezingubo bendawo. Ukusetshenziswa kwamabhodi okukhangisa ukuze kwenziwe umbukiso omkhulu wobuciko ovulekile enkabeni yedolobha kungesinye isixazululo esinjalo.
"Ubuciko Abudingi Uphahla" buzohlala amasonto amathathu, kuze kube nguJulayi 26.
Covid-19 Ubhubhane lwe-COVID-19 Cristiano Ronaldo Lithuania
IDominican Republic yavula imingcele yayo yabavakashi bamazwe aphesheya
ICaribbean Airlines iqala kabusha imisebenzi esekwe eJamaica
Ubuhlungu be-Post-Operative buncishisiwe ngokusetshenziswa kwe-CBD